Mitandrema ny mpizahatany: naseho ny toerana fanaovana heloka bevava mampidi-doza indrindra any Rosia
Home » Fampihorohoroana sy heloka bevava ho an'ny mpandeha: » Mitandrema ny mpizahatany: naseho ny toerana fanaovana heloka bevava mampidi-doza indrindra any Rosia
Ny mpizahatany vahiny dia manintona an'i Russia amin'ny tranony katedraly mamirapiratra, toerana manan-tantara, toerana hafahafa ary toetra mahavariana. Saingy, miaraka amin'ireo fisarihana fizahan-tany mamirapiratra, i Russia koa dia manana faritra mifanalavitra be tsy azo ihodivirana na ny mpitsidika na ny eo an-toerana. Ary izy ireo izao dia natambatra ho lisitra vaovao amin'ireo toerana mampidi-doza ao amin'ny firenena.
Ny YouTuber Rosiana malaza dia namorona horonantsary vaovao manisa ireo toerana 10 ambony indrindra miaraka amin'ny taha ambony indrindra amin'ny heloka bevava, hanapahana izay tanàna 'mampidi-doza indrindra an'i Rosia'.
Ny foibe an-tanàn-dehibe toa an'i Mosko sy St. Petersburg dia tsy ampoizina ao anatin'io lisitra io, miaraka amin'ny tahan'ny heloka bevava mitovy amin'ny tanàna lehibe hafa. Ny fanaovana ny top 10 ihany koa dia toerana sasany izay mety mbola tsy naheno mihitsy.
Ny renivohitra Rosiana dia fanta-daza amin'ny Kianja Mena midadasika, mametraka an'i Kremlin, ary ny teti-dratsy ataon'ny Cold War, noho ireo toerana toa an'i Gorky Park.
Talohan'ny areti-mandringana dia nahitana mpizahatany 17 ka hatramin'ny 21 tapitrisa isan-taona ny tanàna. Na dia ny ankamaroan'ny ankamaroan'izy ireo aza tsy mahita zava-doza noho ny habetsahan'ny dumpling be dia be, ny tanàna lehibe indrindra any Eropa dia toa manana lafiny maizina kokoa.
Araka ny horonantsary, amin'ity tanàna misy tanàna 12 tapitrisa ity, mihoatra ny 140,000 ny heloka bevava notaterina tamin'ny taon-dasa, anisan'izany ny famonoana olona 285 sy fikasana hamono olona. Fa aza esorina aloha i Moskoa avy eo anaty lisitra misy anao - na dia eo aza ny fananana mponina efatra tapitrisa vitsy kokoa, New York dia nanangona 318 tao anatin'ny fe-potoana mitovy.
Ny herinandro lasa teo dia nisy ny fanenjehana iray natao tany an-drenivohitra rosiana taorian'ny mpampianatra mpandihy iray voatifitra ary novonoina tamin'ny andro antoandro. Na dia ahiahiana aza ny sakaizany tany am-boalohany, tsy ela dia nifantoka tamin'ny famantarana mpiasa mpiasa mpifindra monina nolazainy fa efa nikiry azy nandritra ny herinandro maromaro.
Azo lazaina fa renivohitry ny kolontsaina ao amin'ny firenena, ny tanàna lehibe indrindra fahefatra amin'ny kaontinanta dia nantsoina hoe "varavarankely mankany Eropa" an'i Russia noho ny seranan-tsambon'i Baltic Sea. Namboarina hatrany am-boalohany tamin'ny taonjato faha-18, feno aritrano klasika sy lalan-drano mahafinaritra, St. Petersburg dia niasa ho renivohitry ny firenena.
Saingy misy zavatra hafenina ve ny trano cosmopolitan'i Pushkin, Dostoevsky, ary Tchaikovsky? Mandeha amin'ny isan'ny fotoana nanovany ny anarany, angamba. Niorina tamin'ny voalohany ho Sankt-Pieter-Burch, aingam-panahy avy amin'ny Holandey, dia nomena anarana hoe Petrograd nandritra ny Ady Lehibe I. Taorian'ny fitrandrahana Bolshevik dia natao hoe Leningrad, taorian'ny rain'ny revolisiona ny tenany. Ary tamin'ny 1991 dia nisy vato nifidianan'ny olom-pirenena tamin'ny anarany ankehitriny.
Raha jerena fa toerana fitsangantsanganan'ny mpizaha tany iray hafa izy io, dia sarotra ny maminavina fa ny fanadihadian'ny YouTuber dia hahita ny tanàna nanoratra heloka bevava 55,000 tamin'ny taona 2020, miaraka amina mpikaroka vono olona 240.
Izy io dia nanjary lohateny lehibe tamin'ny taon-dasa rehefa hita ny profesora malaza iray, Oleg Sokolov, tao amin'ny reniranon'i Moyka izay namirifiry. Gaga ireo mpiasa mpamonjy voina nahita sombin-tànana vehivavy tapa-kitapo tao anaty kitapony, niaraka tamin'ny fanadihadiana izay nahafantarana fa namono sy nanaparitaka ilay olon-tiany mpianatra 24 taona teo aloha izy. Nomena sazy 12 taona ilay akademika teo aloha tamin'ny herinandro lasa.
Ny renivohitry ny faritra Ural any Russia, Ekaterinburg dia miorina eo an-tsoratr'i Eropa. Ny tanàna fahefatra lehibe indrindra ao amin'ny firenena dia fantatra amin'ny fisakafoanana ao aminy, ary koa ny efitra mahafinaritra eo akaiky eo, ary ny toerana namonoan'ny Romanista ny fianakavian'ny fanjakana romana, Romanovs, tamin'ny 1918.
Ny tanàna lehibe dia manana voninahitra tsy azo lavina noho ny fikapohana an'i Moskoa tamin'ny isan'ny famonoana olona ary fikasana vono olona natao tao tamin'ity taona ity, ary 283 no voarakitra tamin'ny volana novambra, hoy i Varlamov.
Tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity, lehilahy iray avy any amin'ny faritra manodidina an'i Ekaterinburg no voaheloka ho namono olona ary nigadra sivy taona taorian'ny nanolorany ny basiny tamina zatovo kilemaina ara-tsaina tao anatin'ny lesona fitifirana mamo. Tifitra iray no namely an'i Yegor Korkunov, fito taona, izay maty taorian'ny volana maro tao amin'ny fanjakana comatose tany amin'ny hopitaly.
Rostov-on-Don dia tanànan'ny seranan-tsambo Azov misy ny vahoaka Cossacks natsangana, misy mponina iray tapitrisa mahery. Izy io dia fanta-daza noho ny trano mimanda manana endrika Tiorka manan-tantara, ny teatra natsangany tamin'ny endrika traktera, ary ny fahitany ny renirano Don, izay nomena anarana kely.
Rostov dia mikapoka mihoatra ny lanjany raha resaka heloka bevava antonony toy ny halatra sy hosoka, no ahazoany toerana ao anaty lisitra. Ny mampatahotra dia nanamarika izy fa manodidina ny antsasaky ny mbola tsy voavaha.
Ny tanàna dia trano an'i Andrei Chikatilo, fantatry ny Rosiana amin'ny maha-mpivaro-kena an'i Rostov azy. Ny injenieran'ny serasera dia namono zazalahy kely sy zazavavy kely alohan'ny 52 tao amin'ny Firaisana Sovietika teo anelanelan'ny 1978 sy 1990, talohan'ny nisamborana azy. Novonoin'ny miaramila nitifitra azy tamin'ny 1994.
Fitsidihana vato iray monja avy any Rostov no misy azy, ny heloka bevava any Shakhty dia voalaza fa ratsy kokoa noho ny ao amin'ny renivohi-paritra. Ny anarany dia adika ara-bakiteny hoe 'harena ankibon'ny tany', satria nitombo tamin'ny toeram-ponenana namboarina ho an'ireo mpiasa nanangona arintany avy teo amin'ny faritra manodidina izy io.
Ankehitriny, na izany aza, maro amin'ireo toeram-pitrandrahana no nohamarinina na nakatona, ary ny tanàna dia nantsoina ho iray amin'ireo mpamokatra lehibe sy mpanondrana taila any Eropa. Tahaka ireo faritra indostrialy teo aloha, Shakhty dia endrika iray mahazatra ao amin'ny lisitry ny tanàna be olona indrindra any Russia, miaraka amin'ireo mponina maneho ny fiahiany ny manodidina ny faritra misavoritaka eny amin'ny manodidina.
Tanàna iray hafa fantatra amin'ny lova indostrialy, Chelyabinsk dia orinasam-pahefana ara-toekarena Siberia, sehatra mibahan-toerana toy ny metalaly sy ny famokarana fitaovam-piadiana.
Na eo aza ny habeny bitika kely kokoa, Chelyabinsk dia nandrakitra heloka bevava betsaka noho ny tany Moskoa tamin'ny taon-dasa, ary, raha azo antoka ho an'ireo mpitsidika mandalo ny lalamby Trans-Siberia mamakivaky ny velaran-tany atsinanana midadasika any Rosia, ny fanimban-javatra sy ny halatra dia fahita betsaka kokoa eto noho ny any an-kafa, araka ny laharan'i Varlamov.
Tamin'ny taon-dasa, nampanakoako ny fanairana ireo tompon'andraikitra tao an-tanàna rehefa nisy lehilahy iray tratra nanao dokotera tany amin'ny toeram-pitsaboana iray. Na izany aza, ny diplaomany sandoka dia toa ny kely indrindra tamin'ny ampahany tamin'ny tantara, rehefa niseho fa namono olona nahafaty olona izy roapolo taona talohan'izay. Amin'ny maha-zazalahy mpianatra azy, Boris Kondrashin dia nanintona ny mpiara-mianatra iray niverina tany amin'ny tranony, nanome azy fanafody mampitony ary nampisaraka ny vatany.
Sahabo ho sarotra toa azy ny milaza azy, Blagoveshchensk dia tanàna sisin-tany lavitra any amin'ny sisintany miaraka amin'i Shina miaraka amin'ny mponina manodidina ny ampahefatry ny tapitrisa. Notoroana hevitra ny mpitsidika mba tsy hanadino ny tranombakoka misy azy ireo, ahitana fampirantiana momba ny fiainana dia sy ny fomba fiaina nanananan'ireo mpifindrafindra monina izay monina ao amin'ilay faritra.
Efa ho 20,000 XNUMX ny asan-dahalo nitranga tao an-tanàna izay, raha omena ny vahoaka vitsy dia ampy hahazoana toerana ao anaty lisitra.
Toerana mitsambikina iray hafa eo amin'ny lalamby Trans-Siberia, Ulan-Ude dia iray amin'ireo vilany fandrendahana ara-kolontsaina mahaliana indrindra ao Rosia, ho ivon'ny Buddhism Tibetana ao Rosia. Ethnic Buryats, vondrona mpifindrafindra monina mifandraika amin'ny Mongol, dia mahatratra ny ampahatelon'ny mponina ao aminy, ary malaza amin'ny tempolin-drazana sy ny fidirana amin'ny farihin'i Baikal manaitra izy io.
Na eo aza izany, ireo fizahantany mpizahatany, ny tanàna dia mitana ny laharana telo voalohany ao anaty lisitra noho ny fisarihana heloka bevava 22,000 - manodidina ny telo heny noho ny salanisa nasionaly.
Mandeha amin'ny fomba hanaporofoana fa faly miasa ireo mpanao ratsy na inona na inona toetr'andro, Magadan dia miorina amin'ny ranomasina mangatsiaka any Okhotsk ary fantatra amin'ny mari-pana ambanin'ny zero, izay nilatsaka hatramin'ny 30 degre.
Na eo aza ny karama eo an-toerana avo, noho ny sehatry ny indostria miroborobo, mahazo toerana ao amin'ny lisitra izy noho ny famonoana olona 34 izay natao tao amin'ny 2019 - avo dimy heny, pro rata, noho ny salanisa.
Na dia vitsy aza ny famonoana olona ambony tao Magadan tato anatin'ny taona vitsivitsy, dia malaza amin'ny fahafatesan'ny olona mahatsiravina ny faritra. Ny làlambe mankamin'ny tanàna avy any Yakutsk dia fantatra amin'ny anarana hoe Road of Bones, miaraka amin'ireo olona an'arivony maty tamin'ny fanamboarana ny lalana Era Sovietika, izay voalaza fa niditra tao anaty beton fa tsy nalevina tao anaty permafrost.
Ny renivohitry ny faritr'i Tuva, Kyzyl dia tsy fantatry ny mpizahatany, na eo aza ny filazany fa eo amin'ny toerana mahitsy ny 'Center of Asia'. Ny tsangambato misy azy sy ny kodiaran'ny vavaka bodista dia manome lanja azy ny fitsidihana azy manokana, fa ny toerany ho "tanàna mampidi-doza indrindra an'i Rosia" dia mety hisarika andiana mpitsangatsangana vaovao.
Na dia nirongatra aza ny asan-dahalo mahery setra nandritra ny taona 2020, miaraka amin'ny lalàna momba ny fahazoan-dàlana amin'ny alikaola vaovao sy ny fameperana ny dia napetraka noho ny areti-mandringana Covid-19, araka ny horonantsary, dia nitarika famonoana olona tamin'ny faratampony ny faritra, ary famonoana 35 isaky ny Mponina 100,000.
Tsara kokoa ny trano fandraisam-bahiny sinoa noho ny eran'izao tontolo izao